अमिताभ बच्चनको डेढ अर्ब मूल्यको घर “जालसा” बारे केही रोचक तथ्य ! « गोर्खा आवाज
अमिताभ बच्चनको डेढ अर्ब मूल्यको घर “जालसा” बारे केही रोचक तथ्य !
५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ००:००
एजेन्सी । बलिउड उद्योग ग्ल्यामर र विलासिताले भरिएको ठाँउ हो । बलिउड सेलेब्रिटिहरुले मोटो रकम कमाउँछन् र विलासी जीवन बिताउँछन्। उनीहरुले प्रयोग गर्ने कपडा, खानपिन देखि लिएर घरसम्म सबै महँगा र विलासिताले भरिएका हुन्छन्। बलिउड स्टारहरु मध्ये धनी र प्रख्यात कलाकारमा अमिताभ बच्चनले राम्रो स्थान जमाएका छन् ।
आफूले आर्जन गरेको रकम उनले उत्तम तरिकाले प्रोपर्टिमा लगानी गरेका छन्। अमिताभ बच्चनको करोडौ मूल्यका घरहरु विभिन्न ठाँउमा रहेका छन्। जलसा, प्रतिक्षा, जनक, वात्सा, जलसाको पछाडि नँया बङ्गलो र दुबइमा म्यानसन गरी उनका ५/६ वटा शानदार घरहरु रहेका छन्।
उनका प्रशंसक र शुभचिन्तकहरुका लागि उनको घर तीर्थस्थल जतिकै रहेको छ जहाँ हजारौँ मानिसहरु उनको झलक र अभिवादन पाउनका लागि आज पनि उनको घर अगाडि आएर जम्मा हुने गर्छन्। बच्चन परिवारको पुरानो र वास्तविक घर ‘प्रतिक्षा’हो ।
यस घरमा उनी आफ्नो बुवा डा. हरिवंश राय बच्चन, आमा तेजी बच्चन, आफ्नो धर्मपत्नी जया बच्चन, छोरी स्वेता र छोरा अभिषेक बच्चनको साथमा ४० वर्षसम्म बसे । त्यस पश्चात उनका परिवार ‘जलसा’मा सरेका हुन्।
उनका घरहरु मध्ये ‘प्रतिक्षा’सँग उनी बढि मात्रामा भावनात्मक रुपले जोडिएका छन्। किनभने उनका पिता हरिवंश बच्चनले आफ्नो जीवनकालको अधिकतम समय त्यस घरमा बिताएका थिए । आज हामी दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चनको घर जलसाको बारेमा केहि जानकारीहरु दिँदैछौं ।
‘जलसा’ कपोल हाउजिङ सोसाइटि, भि.एल. मेहता रोड, जुहु, मुम्बईमा अवस्थित छ । यो दुई तल्ले आकर्षक अत्याधुनि कबङ्गलो १०,१२५ वर्ग फुट क्षेत्रफलमा रहेको छ । उनको यो आलिशान बङ्गलो घरको अनुमानित मूल्य १ अर्ब २० करोड भारतीय रुपैया रहेको छ ।
तर यस घरको रोचक तथ्य त के छ भने उनले आफ्नै कमाइले यो घर किनेका भने होइनन्। बलिउड निर्देशक रमेश सिप्पीले उनको चलचित्र ‘सत्ते पे सत्ता’मा अमिताभ बच्चनले अभिनय गरेका हुनाले पारिश्रमिकको रुपमा यो घर उपहार दिएका हुन्।
पहिले यो घर अमिताभ बच्चनका भाइ अजिताभ बच्चनकी पत्नी रमोला बच्चनको नाममा रहेको थियो । स्रोतका अनुसार करसँग सम्बन्धित केहि मुद्धाका कारण यसो गरिएको थियो । पछि सन् २००६ मा ‘जलसा’अमिताभ बच्चनकी पत्नी जया बच्चनको नाममा गरियो । यस घरमा धेरै बेडरुमहरु र घर पछाडि विशाल ठाँउ रहेको छ ।
यसको लिभिङ रुम एकदम भव्य र शानदार रहेको छ । यस महललाई सुन, चादि, पित्तलआदि जडित गरी सजाइएको छ । भारतीय आकृति र फूल फक्रेको चित्रणको साथै तान्जोरको चित्रकलाहरुले यो घर सजिएको छ ।
अमिताभ बच्चनको बाल्यकालको घर ‘प्रतिक्षा’ बाट १ किलोमिटरको दुरीमा अहिलेको बच्चन परिवारको घर ‘जलसा’ रहेको छ । अहिले यस घरमा बच्चन आफ्नी पत्नी, छोरा, बुहारी र नातिनी आरध्या बच्चनको साथमा बस्दै आएका छन्। यस घरको भित्रि संरचना अति सुन्दर र मनमा छाप बसाउने किसिमको छ ।
प्रत्येक आइतबार साँझ ६ बजेतिर ‘जलसा’ बाहिर अमिता भबच्चनको झलक पाउनका लागि जम्मा हुने प्रशंसकका भीडलाई बच्चनले अभिवादन गर्ने गरेका छन । यो क्रम अहिले एउटा प्रथा जस्तै भइसकेको छ र कहिलेकाहीं बच्चनसँगै उनका परिवारका अन्य सदस्यले पनि माहोललाई अझ विशेष बनाउन उनलाई साथ दिने गरेका छन्।
अमिताभ बच्चनको अर्को भवन ‘जनक’माजिमहल रहेको छ, जहाँ उनीलगायत उनका परिवारका सदस्यहरु नियमित रुपमा व्यायाम गर्न जान्छन्।